I-BWC011 -I-OMG WIFI / i-GPS / i-4G yeKhamera yokuLungisa uMzimba (iBhetri etshisayo eshushu) -Izisombululo ze-OMG
Iikhamera zomzimba zizixhobo eziphathwayo ezinokurekhoda ividiyo kunye nesandi. Izixhobo zinokudlulisa ividiyo kunye nevidiyo bukhoma nge-3G okanye nge-4G, zilandelele ngqo nge-GPS. Izixhobo zine-TFT yokujonga kunye namaqhosha kuyo kwaye umsebenzisi angasebenzisa isixhobo ngokulula. Iikhamera zomzimba zihlala zisetyenziswa yindoda yamapolisa, unogada namanye amagosa anyanzelisa umthetho.
-Umsebenzisi unokufumana ividiyo ebukhoma kunye nevidiyo nge3G, 4G okanye iWiFi,
-Umsebenzisi unokufumana umkhondo ophilayo wesixhobo nge-GPS eyakhelweyo kwisixhobo. Idatha yeGPS iya kurekhodwa kwifayile yokurekhoda ngesandi nevidiyo, ukuze umsebenzisi afumane ulwazi lwendawo kwifayile yokurekhoda.
- Sebenzisa ibhetri ye-lithium yokuhambisa umbane. Isixhobo sinokurekhoda ngokuqhubekayo iiyure ezili-12 ngeebhetri ezi-2.
Indawo eyakhelwe-ngaphakathi ye-32G. (64G ~ 128G indawo yokugcina ongayikhetha
-Iikhamera zeepikseli ezakhelwe-ngaphakathi ezi-4, inkxaso yokurekhoda kwi-1080P, i-720P okanye isisombululo se-D1, inkxaso ithatha umfanekiso ngeepikseli ezizigidi ezingama-40, iipixels ezingama-32 ezigidi kunye nee-pixels ezigidi ezi-2.
-Nkxaso ye-IR. Inkxaso yokurekhoda ebusuku.
-Rekhoda igama lefayile linolwazi ngomhla, ixesha, uhlobo lwerekhodi, olwenza kube lula ukukhangela kunye noxwebhu.
-Umsebenzisi unokukhangela, akhangele kwaye adlale iifayile kwifowuni.
Inkxaso yeqhosha lenkxaso. I-alarm alarm iqhosha lingathunyelwa kwiziko lolawulo nge-3G / 4G.
-Ukurekhoda ukubethela kwenza ubungqina bukhuseleke ngakumbi.
Isixhobo sinokubonisa i-ID yesazisi, i-ID yomsebenzisi, umhla kunye nexesha.
-Isixhobo sinokubonisa ulwazi malunga nokusetyenziswa kwebhetri, inqanaba lokutshaja, ixesha lenkqubo kunye nendawo yememori. Isixhobo sinokukhanya okukhanyayo kwamandla, ukurekhoda ividiyo okanye iaudiyo. Ukukhanya okuluhlaza kubonisa amandla, ukukhanya okubomvu kubonisa ukurekhodwa kwevidiyo, ukukhanya okumthubi kubonisa ukurekhodwa kwesandi.
-Isixhobo sinokuxela i-alamu yomsitho, kubandakanya i-alamu yebhetri ebaleka iphantsi, indawo engonelanga yenkumbulo yesithuba njl
-Isixhobo sineefayile zokungena. Isixhobo esineziganeko zelog ezibandakanya amandla okucima / ukucima, ukurekhoda ividiyo, ukurekhoda umsindo, ukuthatha imifanekiso, ubume be-GPS, i-3G / 4G uqhagamshelo, kunye nonxibelelwano lweWiFi.
Ixesha lokuqhuba: <8 s
Igalelo levidiyo: 1x ikhamera yekhamera ye-1080p / 720p / 360p yokurekhoda, ifumaneka kwikhamera yangaphandle
Imveliso yevidiyo: I-2 intshi ye-LCD isikrini
Ukurekhoda isisombululo: 1920×1080/1280×720/640×360
Umgangatho wefreyimu: 30 fps @ 1080p
Indlela yokurekhoda: Rekhoda umsindo kunye nevidiyo ngexesha elifanayo
Ukunyanzeliswa: H.264 (Iiprofayili eziphezulu ukuya kwinqanaba le4.1)
Igalelo lomsindo: Ukufakwa kwe-1x MIC, uxhumano lwe-intercom kunye ne-USB
Ushicilelo lomsindo: Ukuxhasa ukurekhodwa komsindo
Ifoto: I-1920 × 1080 8640 4752 × XNUMX
Snap: Ukuxhaswa kwenkxaso ngexesha lokurekhoda (isisombululo sesisombululo kwisisombululo sokurekhoda)
Ukugcina: Yakhelwe kwikhadi le-SD le-32GB (iyafumaneka nge-32 ～ 128GB)
Isibane sokukhanya: Ukwandisa ukukhanya xa urekhoda okanye uthatha isithombe
Laser: Hlela umbono xa ubhala
IR: Ukufikelela kuma-10 wamitha nge-image shape engabonakali ebusuku
Iindlela zomsakazo ezimbini
Thetha Umva: Ukuxhasa inomathotholo yeendlela ezimbini ezahlukeneyo (kuphela kwi-4G / 3G ifowuni)
Thetha kwakhona kwiqonga: Ukuxhasa inomathotholo yeendlela ezimbini phakathi kweso sixhobo (kuphela kwi-4G / 3G ifowuni)
I-engile lens > 125 °
Igalelo le-alam: Ukuxhasa inkxaso ye-alarm kunye ne-alamu ingaboniswa kwiplatifomu
I-USB: 1x USB, ukuhlaja, ukunxibelelana nePC, ukuphucula i-OS, ukudibanisa ikhamera yangaphandle njl
Inkqubo: TCP / IP
3G / 4G: Okukhethiweyo, eyakhiwe kwi-module ye-3G / 4G (i-LTE FDD / i-LTE TDD / i-WCDMA / i-TD-SCDMA / i-GSM / i-CDMA i-EVDO / i-CDMA 1x.
WiFi: Ngokuzithandela, uxhasa uxhumano lweWIFI kunye ne-AP
IGPS: Imodyuli yokhetho yeBDS / GPS / GLONASS, ukurekhoda indawo kunye nekhawulezi
I-OSD: Bonisa kwaye ubhale ixesha, i-ID yesazisi, i-ID yegosa, indawo, isivinini
Bhala ngaphezulu: inkxaso
Dlala umva: Inkxaso yokudlala emva, ifayile efakwe ngexesha kunye ne-alamu
Isantya sokudlala: Inkxaso evela kwi-1 / 128 eya kwi-128
Ukurekhoda kwangaphambili / ukurekhoda kwangaphambili: Ubuninzi bokuqala bokurekhoda kwe20 kunye nokurekhodwa kweposi
I-Dewarp: Ukuxhaswa ukuxhasa ukwenza umfanekiso uchaneke ngakumbi kwaye uyinyani
Uhlobo olukhuselekile: Ufuna iphasiwedi ukufaka ukubeka okanye ukudlala kwimodi ekhuselekileyo
Rekhoda ufihlo: Inkxaso yokurekhoda kweRekhoda, ividiyo efihliweyo inokudlalwa kumdlali okhethekileyo
Ilog: Ukurekhoda amandla / ukucima, ukutshintsha utshintsho, qalisa irekhodi, i-alarm njl
umdlalo: Isoftware yomdlali, ukudlala iikhomera ezininzi ndawonye, ​​kunokudlala nefayili encrypted
I-CMSV6: Isetyenziselwa i-4G / 3G imodeli kuphela, inkxaso ngenkxaso yokubukhoma / ukulandelela ngokuphila / umkhondo wembali
Ukugcinwa kwefirmware: I-Firmware ingahlaziywa nangona i-USB
ixesha: ukuvumelanisa ne-GPS, intanethi, i-PC
Umjelo omncinci omncinci: Umjelo ombini ohlukeneyo wokurekhoda kwaye uphile ngokusakaza nge-4G / 3G
Okungafaniyo: Unokumisela kwisilungiselelo esingagqibekanga
Isibonakaliso: Amandla, irekhoda, i-Snap, irekhodi yomsindo
Battery umthamo: I-1 i-pcs ibhetri enakho ukuphindisela, i-2600mAh nganye, gcina isixhobo se-NON-4G esisebenza malunga ne-8h, gcina isixhobo se-4G esimalunga ne-4.6h.
Ixesha lokuhlawula: malunga ne-4h.
Ibhetri egciniweyo: 60mA (Ngokhetho, gcina ifowuni eqhuba ngexesha lokubheja ibhetri okanye ibhethri iphelile.)
Yobungakanani: 88.3 * 59.8 * 34.4mm
ubunzima: malunga 165g
4779 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-1 Namhlanje